I-2017 Ikhitshi yoNyaka-Iingcinga zoyilo lweKhitshi - Ezona Khitshi Zintle Zango-2017
I-2017 Ikhitshi yoNyaka-Iingcinga zoyilo lweKhitshi
Ikhitshi lethu loNyaka ilungiselelwe nawuphi na umceli mngeni wokupheka - owakhelwe ukuthatha isidlo sangokuhlwa phakathi evekini kunye nokumema i-block-block-feasts ngokufanayo. 'Ikhitshi lihambelana neemfuno zendlu enamagumbi okulala asibhozo, utshilo umyili uJon de la Cruz I-DLC-ID . Kusondele ngokwaneleyo ukubamba isidlo sangokuhlwa umntu omnye okanye abantu abane, kodwa bebanzi ngokwaneleyo ukuba banokwandisa iintsapho zabo ekuphekeni kunye kuMbulelo.
Jonga igalari 14Iifoto Iskimu sombala esihamba yonke, siqala ngeVersailles-ephefumlelweyo emnyama nomhlophe Umfazi wendlu ithayile, ukunqwala kwimbali yekhaya laseSan Francisco: 'Injongo yayikukuba ikhitshi elimnyama nelimhlophe njengelwandle ityuwa kunye nepepile emnyama. Ndikhethe iCornforth White kunye noMnyama oMnyama Farrow kunye neBhola Iindonga, ezinika indibaniselwano engaphelelwa lixesha i-patina encinci elingana nendlu eneminyaka eli-100, utshilo uLa Cruz.Jonga ngokusondeleyo kwaye uza kubona ukuba iithayile zisetelwe embindini, nto leyo eyenza igumbi lizive liqheleke ngakumbi.
'title =' Iphalethi ethulweyo ne-Whimsy encinci 'src =' https: //hips.hearstapps.com/hbu.h-cdn.co/assets/17/28/2048x1365/hbkotyjdlc_160.jpg '> 1I-14Iphalethi ethulweyo enesingqi esincinci
Iskimu sombala esihamba yonke, siqala ngeVersailles-ephefumlelweyo emnyama nomhlophe Umfazi wendlu ithayile, ukunqwala kwimbali yekhaya laseSan Francisco: 'Injongo yayikukuba ikhitshi elimnyama nelimhlophe njengelwandle ityuwa kunye nepepile emnyama. Ndikhethe iCornforth White kunye noMnyama oMnyama Farrow kunye neBhola Iindonga, ezinika indibaniselwano engaphelelwa lixesha i-patina encinci elingana nendlu eneminyaka eli-100, utshilo uLa Cruz. Jonga ngokusondeleyo kwaye uza kubona ukuba iithayile zisetelwe embindini, nto leyo eyenza igumbi lizive liqheleke ngakumbi.
Indawo ekugxilwe kuyo kwindawo enkulu sisiqithi sendawo: Sine- UCesarestone zwi(ubushushu-, ukukrwela- kunye nokungqinisisa amabala ekhitshini), ke wonke umhlaba usebenza njengendawo yokulungiselela. Esi siqithi sihleli kabini DXV iyatshona ngaphantsi I-GROHE ompompi, kubandakanya enye enikezela amanzi acociweyo ngokuthe ngqo kwispout.
'title =' Isiqithi esisebenza nzima 'src =' https: //hips.hearstapps.com/hbu.h-cdn.co/assets/17/28/2048x1365/hbkotyjdlc_002.jpg '> MbiniI-14Isiqithi esisebenza nzima
Xa indawo ineesilingi ezinde, ufuna idrama encinci phezulu, nayo. Ukusebenzisana negcisa, i-de la Cruz yenzele i-rack yesiqhelo ukulungiselela ukusebenziseka okuphezulu- imbiza nganye ixhonywe ngesiciko sayo, ngenxa yoko akukho mfuneko yokumba iikhabhathi zamaqabane ayo. Iiglobhu zeglobhu eziphuculiweyo ze Ukukhanya kweTroy ukudibana kwezibane ezongeziweyo, kufuneka ngaphezulu kwesithuba esisebenzayo sokulungiselela.
'title =' I-Pack Rack-Turn-Art-Piece esebenzayo 'src =' https: //hips.hearstapps.com/hbu.h-cdn.co/assets/17/28/2048x1365/hbkotyjdlc_015.jpg '> 3I-14Umsebenzi wePot Rack-Turned-Art Piece
Isinyithi esikhulu esingenasici Thermador 60 'Pro Grand Steam Uluhlu ngumtshintshi womdlalo, de la Cruz utsho. Isixhobo sinezinto zokutshisa ezintandathu, i-griddle ye-unstick-zone, i-oveni ye-intshi engama-36 kunye nedrowa yokufudumeza ecaleni kwesitovu kunye ne-oveni yokuhambisa ekhawulezisa ukuphinda ukutya. 'Ndithembele kwimicrowave yam a okuninzi , ke ukuba nolunye ukhetho kunika ukupheka okunempilo kwinqanaba elifanelekileyo, 'uyongeza.
'title =' Isitovu seNkcazo 'class =' ​​lazyload lazyload '> 4I-14Isitovu seNkcazo
Umxube we Ingqokelela kaMateyu Quinn izixhobo zentsimbi kunye nokusingathwa koku IJWH Iikhabhinethi zezinye zezinto ezizithandayo ze-la la Cruz zesiqithi. Yenza ngokwezifiso-ukwazi I-Thermador Star-Sapphire Isitshisi sokuhlamba impahla idibanisa ngqo kwisithuba ngelixa uziqhayisa ngesantya eshushu sokuhlamba kwimarike.
'title =' Dishwasher 'efihliweyo' class = 'lazyimage lazyload'> 5I-14Isixhobo sokuhlamba izitya esifihliweyo
Inkqubo ye- I-Thermador 36 'Ifriji kunye neKholamu yeFreezer Inqaku ngalinye linolawulo olupheleleyo lwe-TFT kunye neelitha ezilawulwa bubushushu ezilawulwa ngokuzimeleyo ezilawula ubushushu ukugcina ukutya kuhlaziya, ixesha elide. Ngcono nangakumbi: Inkqubo yokuNceda uMnyango oVulekileyo, evumela abapheki ukuba bacinezele okanye Tsalaemnyango ukuze ivuleke, idityaniswe nemigqomo ethambileyo yokuvalwa ngokungabanjwa kancinci.
'title =' So Refrigeration Smart 'class =' ​​lazyload lazyload '> 6I-14Ukukhenkcisa okuninzi kangako
Inkqubo ye- I-Thermador 36 'Ifriji kunye neKholamu yeFreezer Inqaku ngalinye linolawulo olupheleleyo lwe-TFT kunye neelitha ezilawulwa bubushushu ezilawulwa ngokuzimeleyo ezilawula ubushushu ukugcina ukutya kuhlaziya, ixesha elide. Ngcono nangakumbi: Inkqubo yokuNceda uMnyango oVulekileyo, evumela abapheki ukuba bacinezele okanye tsala emnyango ukuze uphume uvuleke, ubhangqwe ngemigqomo ethambileyo yokuvalwa ukuze ubambe nje ubunewunewu.
imibala entle yegumbi lokuhlala
Ngeendlela ezintathu- 'ifriji' (ukugcina imveliso entsha), 'i-pantry' (ukugcina izinto kubushushu obufudumeleyo) okanye 'ibha' (eyilelwe ngokukodwa iziselo), kukho imilo I-Thermador 24 'Ngaphantsi kweCounter Refrigeration Drawer ukuhambelana nazo zonke iimfuno.
'title =' I-Drawer ebandayo yokumangalisa 'iklasi =' lazyload lazyload '> 7I-14Idrowa yoku-Chaza emangazayo
Entsha I-Thermador 24 'Ikholamu yewayini unayo Ntathu kwimimandla, ukuze ukwazi ukwenza ngokwezifiso ukugcinwa kwakho ngokusondeleyo ngokungafaniyo, hayi umbala nje. Kwaye inako ukugcina ukuya kwiibhotile ezingama-98, awuzukuphelelwa phambi kwepati yakho elandelayo yesidlo sangokuhlwa.
'title =' Yonke indawo yokugcina iwayini oyifunayo 'class =' ​​lazyload lazyload '> 8I-14Lonke ugcino lweWayini olufunayo
Injongo yayikukwenza ikhitshi elitsha, elinezixhobo zakutshanje ezaziziva zintsha kwindlu enembali, kodwa ingezizo ezasemzini okanye ezizayo, utshilo u-la la Cruz. Kwaye i I-Thermador 30 'yokudityaniswa kathathu eyakhelweyo ngaphakathi ngedrawer yokukhupha ubushushu kwaye i-microwave ibethe uphawu.
'title =' Amandla okupheka nangakumbi 'class =' ​​lazyload lazyload '> 9I-14Namandla angakumbi okupheka
U-de la Cruz uthi: 'Zonke i-intshi zesikwere sekhitshi emile okwe-T kufuneka ziqwalaselwe kwaye zisetyenziswe. Ukubeka ishelfu ngu Indlu yendlu isebenza njenge-pantry ebonakalayo ngelixa iglasi Blisshaus Iingqayi zivumela iintsapho ukuba zibone oko banako, bayisebenzise kwaye bathenge okuncinci, ukunciphisa inkunkuma ngelixa kukhokelela kulondolozo, ngokwenkampani.
'title =' Yonke into ingaphakathi 'iklasi =' lazyload lazyload '> 10I-14Yonke into ingafikeleleki
Esona sichumisi sisesona silungileyo ngaphakathi
Kuyo yonke ikhitshi, kukho inani leendawo zokufihla ezenzelwe ukucinga ngezinto zombane. 'Igaraji yezixhobo' inika isisombululo esiqatha kumboniso wee-countertop, ngaphandle kokufaka into kwindawo yokugcina okanye ekuzingeleni indawo yokuphuma.
'title =' Sneaky Small Appliance Storage 'iklasi =' lazyimage lazyload '> Shumi elinanyeI-14Sneaky Isixhobo Esincinci Sokugcina
Isinyusi sokuxuba i-hydraulic sithatha umsebenzi wokunyanzela izihlunu ekukhuliseni izixhobo ezinzima kwiidrowa zabo ukuya kwikhawuntara. Ngokutyhala, iyehla ibuyele kwindawo yokugcina xa ingasafuneki.
'title =' Kubandakanywa isixhobo sokuPhakamisa isixhobo 'class =' ​​lazyload lazyload '> 12I-14Kubandakanya isiXhobo sokuPhakamisa
ILeviton Inkqubo ye-EcoKit yeKhaya inokulawula yonke into ukusuka kubushushu ukuya kuluhlu lwakho lokudlala. Isebenza kakuhle phantse kuyo nayiphi na igajethi yesikrini sokuchukumisa kwaye inokuqhagamshelwa kwi-smart TV yakho ekude.
'title =' Inkqubo ye-Smart 'yeklasi =' lazyload lazyload '> 13I-14Inkqubo eSmart
'Kuba ikhitshi ligumbi lokuhlala elitsha laseMelika, bendifuna ukuqiniseka ukuba sibandakanya indawo entle yokutya apho usapho lunokutya khona, basebenze kwiilaptops zabo, nditsho nokulala, utshilo u-la Cruz. Wakhetha i-antique ekhangeleka, itafile ephefumlelweyo yaseNtaliyane Imayini kuhlalwe nge-10, kubhangqwe isidlo sangokuhlwa kunye nezitulo ngu Imizi-mveliso ye LEE .
'title =' Banquette Breakfast 'iklasi =' lazyimage layload '> 14I-14Ibhentshi yesidlo sakusasa
OkulandelayoUkutyelela i-2017 Kitchen yoNyaka Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukuba babonelele ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
ukuhombisa igumbi lokulala
izimvo ezincinci zemifuno yegadi
Ioyile esekwe kumanzi asekwe